ဒဏ်ရာဟောင်း အမာရွတ်ပျောက် အသားဖြူ Lotion - Fruity Body Booster | Myanmar Free Ads ' : ''; var month = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]; var month2 = ["Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"]; var day = postdate.split("-").substring(0,2); var m = postdate.split("-"); var y = postdate.split("-"); for(var u2=0;u2
Myanmar Free Ads
Home / Cosmetics / Lotion / ဒဏ်ရာဟောင်း အမာရွတ်ပျောက် အသားဖြူ Lotion - Fruity Body Booster
ဒဏ်ရာဟောင်း အမာရွတ်ပျောက် အသားဖြူ Lotion - Fruity Body Booster
Maung Pauk 8:00 AM Cosmetics , Lotion
💓 ခြင်ကိုက်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ အမည်းစက် အမာရွတ်တွေ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ခြေသလုံး လက်တို့မှာဖြစ်တဲ့ နှစ်ရှည်လများအမာရွတ်များကို တစ်ပတ်အတွင်း လျော့ပါးသက်သာစေတဲ့ Body Boosterလေးပါရှင်
💓 သဘာဝသစ်သီး သစ်ဥ တွေနဲ့ပဲ 100%ဖော်စပ်ထားလို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလုံးဝမရှိပဲ အမာရွတ် ဒဏ်ရာများကို ပျောက်ကင်းစေရုံသာမက အသားဖြူဖွေးတောက်ပစေတဲ့ Whitening လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင် …
💓 အသားလတ်တဲ့သူဆို နှစ်ပတ်အတွင်း ဖြူဖွေးဥပြီး ပုလဲလိုအသားအရည်လေးဖြစ်လာစေမှာပါ အသားညိုသူများကတော့ နှစ်ပတ်ဆိုရင်ပဲ အသားကဝင်းလာပြီး လတ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်နော် …
💓 ပန်းသီးမှ ရရှိတဲ့ အသားအရည်ရဲ့ ဒဏ်ရာအဟောင်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း Collegen ကျုံ့နိုင် ဆံ့နိုင်ခြင်းကို တိုးပွားစေတဲ့ အစွမ်းသတ္တိ ,
💓 စပျစ်သီးမှ ရရှိတဲ့ နေလောင်ခြင်း အကြောပြတ်ခြင်း သွေးလှည့်ပတ်မှုစနစ်မကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကို အကောင်းအတိုင်းဖြစ်စေခြင်း…
💓 နာနတ်သီးမှ ရရှိတဲ့ ပျက်စီးခြောက်သွေ့ပြီး မည်းညစ်တဲ့အသားအရည်ကို အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးပြီး ဖြူဖွေးတောက်ပစေတဲ့ အာနိသင်နဲ့
💓 သံပုရာသီးမှရရှိတဲ့ Vitamin C ဓါတ်က အရေပြားပေါ်က အနာအဆာအားလုံးကို အကျက်မြန်စေပြီး Cell အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးကာ အသားအရည်စိုပြေစေခြင်းစတဲ့ အသားအရည်အကျိုးပြုဓါတ်ပေါင်းများစွာပါဝင်တာကြောင့် အငားအရည်နဲဘ မတည့်မှာလုံးဝစိုးရိမ်စရာမရှိတော့ပါဘူးနော်.
💓မနက်တကြိမ် ညတကြိမ်ရေခ်ျုးပြီး သာမာန်Lotionလိမ်းသလိုလိမ်းရုံနဲ့ နှစ်ပတ်အတွင်း သိသာစွာ အမာရွတ်တွေပျောက်ပြီး အသားဖြူလာမှာအမှန်ပါနော် …
ခွငျကိုကျပွီးကနျြခဲ့တဲ့ အမညျးစကျ အမာရှတျတှေ မီးလောငျဒဏျရာ ခွသေလုံး လကျတို့မှာဖွဈတဲ့ နှဈရှညျလမြားအမာရှတျမြားကို တဈပတျအတှငျး လြော့ပါးသကျသာစတေဲ့ Body Boosterလေးပါရှငျ
💓 သဘာဝသဈသီး သဈဥ တှနေဲ့ပဲ 100%ဖျောစပျထားလို့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးလုံးဝမရှိပဲ အမာရှတျ ဒဏျရာမြားကို ပြောကျကငျးစရေုံသာမက အသားဖွူဖှေးတောကျပစတေဲ့ Whitening လေးဖွဈပါတယျရှငျ …
💓 အသားလတျတဲ့သူဆို နှဈပတျအတှငျး ဖွူဖှေးဥပွီး ပုလဲလိုအသားအရညျလေးဖွဈလာစမှောပါ အသားညိုသူမြားကတော့ နှဈပတျဆိုရငျပဲ အသားကဝငျးလာပွီး လတျလာမှာဖွဈပါတယျနျော …
💓 ပနျးသီးမှ ရရှိတဲ့ အသားအရညျရဲ့ ဒဏျရာအဟောငျးမြားကို ပွုပွငျပေးခွငျး Collegen ကြုံ့နိုငျ ဆံ့နိုငျခွငျးကို တိုးပှားစတေဲ့ အစှမျးသတ်တိ ,
💓 စပဈြသီးမှ ရရှိတဲ့ နလေောငျခွငျး အကွောပွတျခွငျး သှေးလှညျ့ပတျမှုစနဈမကောငျးမှနျခွငျးတို့ကို အကောငျးအတိုငျးဖွဈစခွေငျး…
💓 နာနတျသီးမှ ရရှိတဲ့ ပကျြစီးခွောကျသှပွေီ့း မညျးညဈတဲ့အသားအရညျကို အမွနျဆုံးပွုပွငျပေးပွီး ဖွူဖှေးတောကျပစတေဲ့ အာနိသငျနဲ့
💓 သံပုရာသီးမှရရှိတဲ့ Vitamin C ဓါတျက အရပွေားပျေါက အနာအဆာအားလုံးကို အကကျြမွနျစပွေီး Cell အသဈဖွဈပျေါမှုကို အားပေးကာ အသားအရညျစိုပွစေခွေငျးစတဲ့ အသားအရညျအကြိုးပွုဓါတျပေါငျးမြားစှာပါဝငျတာကွောငျ့ အငားအရညျနဲဘ မတညျ့မှာလုံးဝစိုးရိမျစရာမရှိတော့ပါဘူးနျော.
💓မနကျတကွိမျ ညတကွိမျရချြေုးပွီး သာမာနျLotionလိမျးသလိုလိမျးရုံနဲ့ နှဈပတျအတှငျး သိသာစှာ အမာရှတျတှပြေောကျပွီး အသားဖွူလာမှာအမှနျပါနျော …
🎀Fruity Body Booster🎀
Price - 7500 Ks ( instock )
Soap - 3000ks
Ph 09451689031, 09787179972 ကိုဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်..
ကြော်ငြာထည့်လိုသူများ 09440225635 သို့မဟုတ် 09974701800 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
About Maung Pauk
အိမ်ရှင်မများအတွက် Medicated_Stick_USA ( မိန်းမကိုယ် ကျဉ်းဆေး )
အိမ်ရှင်မများအတွက် Medicated_Știck_USA ( မိန်းမကိုယ် ကျဉ်းဆေး ) အိမ်ထောင်သက်ကြာလာလို့ မိမိ ခင်ပွန်းကိုယ့်အပေါ် အချစ်ပေါ့ သွားမှာ စ...
ဆေးလိပ်ဖြတ်စက် X6 ရေငွေ့ကို အခြေခံထားသော ဆေးလိပ်အစားထိုး စက်ပါ။ ဆေးလိပ်သောက်၍ ရသော အဆိပ်တောက် မီးခိုးငွေ့များ ကို ဤစက်ရဲ့ရေငွေ့တွင် ...
အမှန်အကန် ကိတ်ချင်သူများအတွက် Over Doomz (ရင်ကြီးဆေး)
ကိတ်ချင်တာ ကိတ်မလာလို့ အင်တွေထု၊ ရင်တွေဖုပြီး တကယ်တမ်းကျတော့ အမှန်အတိုင်း မကိတ်မှန်းသိလာတဲ့အခါ အရှက်ရစရာပေါ့.. အကိတ်​​ခေတ်​ဆို​တော့အမှ...
Calcium Height Up အရပ်ရှည်ဆေး (သင်္ကြန် အထူးပိုရိုမိုးရှင်း ၂ ဘူးဝယ် ၁ ဘူးလက်ဆောင်)
အရပ်ရှည်ရှည် Smart ကျကျဖြစ်ဖို့ Height Up Calcium လေးရှိနေပါပြီ ✔ လူတိုင်းအသက် ၃၀ မကျော်သေးပါက အရပ်ရှည်ဖို့အခွင့်အရေးရှိပါသေးသည် ✔ ဆေး...
Andrea Hair Growth Essence (အစွမ်းထက် ဆံပင်ပေါက်ဆေး)
Andrea Hair Growth Essence (အစွမ်းထက် ဆံပင်ပေါက်ဆေး) - ဆံပင်မပေါက် လို့ စိတ်ညစ်နေစရာမလို။ ဆံပင်မသန်လို့ ဆံပင်ပါးလို့ ဆံပင်တွေကျွတ်...
So CoQ GLUTA အသားဖြူ​ဆေး ဆိုပဲ..
So CoQ Glutaသည်​ ဘယ်​​တော့မှ မဖြူ​တော့ဘူးလို့​ထင်​​နေသူများအတွက်​ အာမခံ အသားဖြူ​သောက်​​ဆေး​လေး မြန်​မာနိုင်​ငံ online Shopများတွင်ေ...
အသားဖြူဖြူ၊ အရပ်မြင့်မြင့်၊ ပါးသိုင်းမွေးလေးနဲ့ အထာကျကျ
-အသားအရည်ဖြူစင်ချင်တယ် -အရပ်မြင့်မြင်နဲ့ စတိုင်ကျချင်တယ် -ပါးသိုင်းမွှေး နှုတ်ခမ်းမွှေးရေးရေးလေးနဲ့လန်းချင်တဲ့ကွီးတို့အတွက်ရော -ထိပ်တွေ အနောက်ေ...
တင်ပါးအတွက် အထူးသီးသန့် Hip Lift Up Cream
အိမ်ထောင်သည်မမများ တင်မရှိလို့တင်ပါးပြားနေလို့တင်ပါးဘေးချိုင့်နေလို့၊ တင်ပါးရှူးပြီး ပုံပျက်နေလို့၊ ကလးမွေးထားရ်ျတင်ပါးအောက်ကျနေလို့...
Gluta Extra White နဲ့ အသားရေကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်း ကြစို့
အသားရေလှပချင်တယ် ဒါပေမယ့် cream တွေ skin care တွေလုပ်ရမှာပျင်းကြသူများ မလုပ်ချင်ကြသူများအတွက် Gluta Extra White ) ကို တနေ့ ၂ လုံး သောက...
ဒဏ်ရာဟောင်း အမာရွတ်ပျောက် အသားဖြူ Lotion - Fruity Body Booster 💓 ခြင်ကိုက်ပြီးကျန်ခဲ့တဲ့ အမည်းစက် အမာရွတ်တွေ မီးလောင်ဒဏ်ရာ ခြေသလုံး ...
Fitness & Slim
Pure Fruit Hair Removal
Gas မလိုတဲ့ USB မီးခြစ်
Gold Bar (Energy Beauty Bar) TV မှာ​ကြော်​ငြာ​နေတဲ...
ဒဏ်ရာဟောင်း အမာရွတ်ပျောက် အသားဖြူ Lotion - Fruity ...
စွယ်စုံ သုံး အနှိပ်စက် 3D Massager ကို 28000 ကျပ်န...
Double Wheel အားကစားစက်
စွမ်းအားမြင့် စပျစ်သီး အသားဖြူဆေး 4G Beta Plus Sup...
Copyright © 2014 Myanmar Free Ads